Ụgbọ elu si Doha, Qatar ruo Sofia, Bulgaria bụ akara afọ iri gara nke ọma
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu si Doha, Qatar ruo Sofia, Bulgaria bụ akara afọ iri gara nke ọma
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Bulgaria • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Qatar Airways na -arụ ọrụ ugbu a Airbus A320 ọgbara ọhụrụ nke na -egosipụta oche iri na abụọ na klaasị azụmaahịa yana oche 12 na klaasị akụ na ụba.
Qatar Airways ga -amaliteghachi ụgbọ elu Doha na Sofia.
Qatar Airways ga -eji ụgbọ elu Airbus A320 na Qatar gaa Bulgaria.
Enwere "ọchịchọ siri ike" maka ụgbọ elu n'etiti Doha na Sofia.
Qatar Airways jiri Bulgaria mee akara dị mkpa na akụkọ ntolite ya, na -eme ememme afọ iri gara nke ọma kemgbe ụgbọ elu mbụ dị n'etiti Doha na Sofia Airport (SOF) na 10 Septemba 14.
Qatar Airways na -arụ ọrụ ugbu a Airbus A320 ọgbara ọhụrụ nke na -egosipụta oche iri na abụọ na klaasị azụmaahịa yana oche 12 na klaasị akụ na ụba. Ha niile na-erite uru site na sistemụ ntụrụndụ ụgbọ elu ama ama nke Oryx One.
Qatar Airways'Onye isi otu otu, Maazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Ọ dịla anya anyị ji nganga na -ejere Bulgaria ozi ma jikọọ obodo a mara mma na netwọkụ okporo ụzọ ụwa anyị. Amaara m mgbe mbụ anyị malitere ife efe na Sofia na nke a bụ mmalite nke mmekọrịta siri ike na -adịgide adịgide. N'ime afọ gara aga, anyị ahụla uru ọrụ anyị na Bulgaria nke gafere ọrụ anyị nke ijikọ ndị mmadụ ọnụ. Fgbọ elu anyị enyerela ndị njem si gburugburu ụwa aka ịhụ nnabata na akụkọ ọdịnala Bulgaria ka ha na -akwado mbupụ ngwaahịa Bulgarian n'ahịa ndị mba ofesi.
“Ọ bụ ihe akaebe maka ike siri ike yana nkwenye siri ike anyị nye obodo a, na anyị ga -akwado ịkwado ụgbọ elu n'etiti Doha na Sofia, site na Disemba afọ a. ”
Onye isi oche ọdụ ụgbọ elu Sofia CEO Jesus Caballero kwuru, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị na onye ọrụ Qatar Airways na -eje ozi Doha na Sofia. Ọ na -enye ndị ahịa azụmaahịa na oge ntụrụndụ ohere inyocha isi obodo anyị mara mma nke Bulgaria ma ọ bụ obodo Varna na Bourgas nke dị n'ụsọ osimiri ekele maka codeshare n'etiti Qatar Airways na Bulgaria Air nwere njikọ ụgbọ elu sitere na Sofia. Mmekọrịta ogologo oge anyị na Qatar Airways pụtara nye anyị nke ukwuu, anyị na-atụkwa anya iwusi ya ike na 2022 mgbe FIFA World Cup ™ ga-eme na Qatar. "
Fgbọ elu ndị a enyekwara aka bulie njikọ azụmaahịa Bulgarian n'ime afọ iri gara aga na ugbu a Qatar Airways Cargo na -enye ikike ibu ibu karịa kwa izu, ụzọ ọ bụla na ụgbọ elu na -arụ n'ụzọ.
Ihe omume Qatar Airways na Bulgaria:
2011 - Ụgbọelu bidoro ife efe na Sofia ugboro anọ n'izu site na Bucharest, Romania na -eji A320.
2012 - Ụgbọ elu abawanyela ugboro ise n'izu.
2014 - Malite ọrụ ụbọchị niile n'etiti Sofia na Doha.
2015 - Akara akara ụgbọ elu ndị nwere nkwụsị na Belgrade, Serbia.
2016 - Ụgbọ elu ụgbọ elu malitere ịbawanye okpukpu abụọ kwa ụbọchị tupu ọrịa ọjọọ amalite.
2020 - Mach, Qatar Airways na Bulgaria Air bịanyere aka na nkwekọrịta codeshare.
2020-Ọktọba, ụgbọ elu na-amaliteghachi post-Covid 19, dị ka mkpado na ọrụ ya na Bucharest, Romania.
2021-Site na Disemba 16, a na-atụ anya na ụgbọ elu ga-akwụsị na Doha ruo Sofia ugboro anọ n'izu.
Bulgaria kwusiri ike na mgbake maka gburugburu ebe obibi site na ọrịa na -efe efe, Qatar Airways ghọtakwara mkpa ọ dị idu ndú gburugburu ebe obibi iji chekwaa ụwa anyị. Ụgbọ elu ahụ na-enyocha ụzọ na-adigide maka ụgbọ elu, yana itinye ego ya na ụgbọ elu kacha arụ ọrụ nke ọma-gụnyere Airbus A350 na Boeing 787-na-emesi ike mkpebi Qatar Airways maka iru ikuku ikuku efu site na 2050.
Usoro nhazi ụgbọ elu Sofia ugbu a: 7x kwa izu (nhazi oge mpaghara)
Doha (DOH) ruo Sofia (SOF) QR 395 na -apụ: 08:30 rutere: 15:35 (otu nkwụsị na Bucharest maka otu awa)
Sofia (SOF) gaa Doha (DOH) QR 396 na -apụ: 16:35 rutere: 23:15 (otu nkwụsị na Bucharest maka otu awa)
Nhazi ụgbọ elu Sofia Site na 16 Disemba: 4x kwa izu na-akwụsịghị (dabere na nkwenye)
Doha (DOH) ruo Sofia (SOF) QR 227 na-apụ: 07:30 abata: 11:35 na-akwụsịghị
Sofia (SOF) gaa Doha (DOH) QR 228 na-apụ: 12:35 rutere: 18:15 na-akwụsịghị